အသက် စိစစ်ခြင်း ဗီဒီယို - ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်း
ပင်မစာမျက်နှာ အသက်အတည်ပြုခြင်း ဗီဒီယို
အင်တာနက် ညစ်ညမ်းသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကလေးများက ပေးဆောင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်အတည်ပြုချက်ဗီဒီယိုသည် ကလေးများအား အွန်လိုင်းတွင် ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန် အဘယ်ကြောင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြသထားသည်။
porn hosting site များအားလုံးရှိရန် အချိန်တန်ပြီ #အသက်အရွယ်အတည်ပြုခြင်း။။ ပိုမိုလေ့လာပါ အသက်အရွယ်စိစစ်အတည်ပြု.
ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် သင့်ကွန်ရက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်အတည်ပြုခြင်း ဗီဒီယိုကို မျှဝေပါ။ ဤလုပ်ငန်းသည် လိုင်စင်ရတစ်ခုအောက်တွင်ရှိသည်။ Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives ၄.၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်စင်
Gabe သည် 12 နှစ်တွင် porn နှင့် စတင်ခဲ့သည်။ သူ 22 နှစ်တွင် သူတကယ် စွဲဆောင်ခဲ့သော မိန်းကလေးတစ်ဦးအတွက်ပင် ၎င်းကို မထနိုင်တော့ပေ။
အဲဒါကို Erectile Dysfunction သို့မဟုတ် ED လို့ခေါ်ပြီး ဒါဟာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အသက် ၄၀ အောက် အမျိုးသားများ၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ယင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်3ကစလို့ အတိုးနှုန်းတွေ တဟုန်ထိုးတက်လာပြီး အခု 40% လောက်တက်လာတယ်။ အခုလို တိုးမြင့်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းရှိပါတယ်။
2006 ခုနှစ်ကတည်းက ၎င်းသည် အခမဲ့ဗီဒီယို porn အွန်လိုင်းတွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့် အမာခံအရာများကိုပင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် အလွန်လွယ်ကူလာသည်။ Effects များပေါ်လာရန် အချိန်အနည်းငယ်ကြာခဲ့သော်လည်း အခြေခံအားဖြင့် ဒေတာများသည် အမာခံ porn နှင့် hard-ons အနည်းငယ်သာ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ဒေတာများက ဆိုသည်။ ယောက်ျားတွေအားလုံးက ဖျော်ဖြေဖို့ ရုတ်တရတ်စိတ်မပူကြဘဲ- ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်အတွက် လက်တွဲဖော်တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲ ညစ်ညမ်းအတွက် ကောင်းကောင်းရနိုင်ကြတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကို ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ စိုက်ထူမှုတွေ ပြန်ဖြစ်လာပေမယ့် လနဲ့ချီကြာနိုင်ပါတယ်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ- ဦးနှောက်စကင်န်ဖတ်သူများသည် ကိုကင်းအသုံးပြုမှုအစပျိုးမှုများကဲ့သို့ ညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းများကို စွဲစွဲမြဲမြဲတုံ့ပြန်ကြသည်ကို ပြသသည်။ BBC3 စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် အမျိုးသမီးအားလုံး၏ 14% နှင့် အမျိုးသားပါဝင်သူအားလုံး၏ 30% ကျော်တို့သည် ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
နောက်တစ်ခုရှိသေးသည်- ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်အများအပြားကိုကြည့်ရှုခြင်းသည် သုံးစွဲသူများသည် လိင်ဆက်ဆံမှုတွင် ရန်လိုရန် အလားအလာ ခြောက်ဆပိုများကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ အရိုးအဆစ်များ [စိုက်ထူခြင်း] နှင့် သင့်လက်တွဲဖော်နှင့် ပြဿနာများ မရှိတော့ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ လိမ်ညာမှုပါပဲ၊ အခမဲ့ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ မင်းရဲ့ ထော့နဲ့ ထော့နဲ့ ကွမ်းသီးကို ပြုပြင်ဖို့ ဆေးတွေ ရောင်းဖို့ ကူညီပေးတယ်။ ၎င်းသည် သင့်အား ပရီမီယံအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအတွက် ပေးဆောင်စေလိုသည်။ ၎င်းသည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို ကြော်ငြာရှင်များထံ ရောင်းချပေးသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပစ်မှတ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရများသည် အရက်၊ စီးကရက်နှင့် လောင်းကစားများကဲ့သို့ပင် အွန်လိုင်း ညစ်ညမ်းအတွက် အသက်အရွယ်ကို စိစစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင် 18 နှစ်ရောက်သောအခါ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်သည်. ပြီးတော့ တကယ့်လက်တွေ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်နဲ့ ပျော်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီမတိုင်ခင်အထိ၊ အပြာကိုကျော်ပါ – သင့်အရိုး [စိုက်ထူခြင်း] ကို သိမ်းဆည်းပါ။
အကူအညီအတွက်၊ သို့သွားပါ- Yourbrainonporn.com, NoFap.com, RebootNation.org, RewardFoundation.org ဒါမှမဟုတ် အဝတ်အချည်းစည်းအမှန်တရားစီမံကိန်း.